FAMPAHALALANA SY SARY AVY AMIN'NY COLLIE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary avy amin'ny Collie Dog
Ny Finoana, Huntingtons dia nirehitra indray CGC ilay manga merle Collie tamin'ny faha-3 taonany
Lisitry ny alika miteraka Collie Mix
Collie lava volo
Alika lehibe sy mahia ary matanjaka ny Collie. Ny tampon-karandohany dia fisaka ary ny volomaso dia arched. Ny lohany dia miendrika wedge ary boribory ny montso, mihidy amin'ny orona mainty, mijanona kely. Voasoka ny tarehy. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso salantsalany dia miendrika amandy. Ny lokon'ny maso dia volontany mainty afa-tsy ny manga manga, izay mety manga ny maso na iray amin'ny loko tsirairay. Ny sofina kely dia miarina 3/4 miaraka amin'ireo tendrony mihetsiketsika mankany aloha. Somary lava ny hatoka. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatana. Mahitsy ny tongotra. Ny rambony dia somary lava miaraka amina fihodinana ambony na fihodinana any amin'ny farany ary ampidinina ambany. Misy karazany roa ny palitao, marokoroko sy malama. Ny palitao marokoroko dia lava sy be dia be manerana ny vatana, saingy fohy kokoa ny lohany sy ny tongony, ary ny palitao dia mamorona boribory manodidina ny tendany sy ny tratrany. Ny palitao ivelany dia mahitsy sy masiaka raha mikasika azy, ary ny palitao dia malefaka sy tery. Ny karazana palitao malama dia manana palitao iray santimetatra fohy manerana ny vatana. Ny loko palitao amin'ny karazany marokoroko sy malefaka dia misy sable sy fotsy, tricolor mainty, fotsy ary volondavenona, manga manga na fotsy be indrindra miaraka amin'ny marika sable, tricolor na manga merle.
Alika mahira-tsaina ny Collie. Sensitive, malefaka fomba, mamy, mora zatra sy tsy mivadika, matetika dia tsara amin'ny biby hafa ary sariaka amin'ny alika hafa. Izy ireo dia mpiandry voajanahary alika kely dia mety hanandrana sy hiompy olombelona, ​​ary mila ampianarina tsy hanao izany. Mahatoky, milalao, manara-penitra ary miaro ireo olona ao amin'ny fianakaviany ary tsara amin'ny ankizy, i Collies dia manana fahatsapana fitarihana hafahafa. Alika tsara toetra sy sariaka izy ireo. Matanjaka any ivelany izy ireo. Araraoty tsara izy ireo hisorohana azy ireo tsy ho mailo amin'ny olon-tsy fantatra. Tsy izany masiaka , saingy mirona hampiahiahy ny olona tsapany izy ireo tsy miovaova vibe avy amin'ny. Isan'andro mandeha tongotra dia zava-dehibe. Tsy misy a hentitra, nefa milamina , matoky tena ary tompony tsy tapaka OMS mametraka ny lalàna ary mifikitra amin'izy ireo, dia mety ho tonga fanahy iniana, mafy loha sy kamo. Ity karazana ity dia tokony voaofana moramora , fa miaraka amin'ny rivotra feno fahefana na handà ny hiara-miasa izy. Karazana madio, ny Collie dia somary mora vaky trano . Ny tompona sasany dia mitatitra fa ny Collies marokoroko dia tsy tia ny rano noho ny lanjan'ireo palitao rehefa mando. Hitanay ireo sarimihetsika tamin'ny Internet nilomano tao amin'ny Collies, na izany aza, na dia betsaka aza ny tsy mety dia tsy tanteraka mihitsy izany. Ny Collies milamina sasany dia nanjary nahomby tamin'ny famonjena rano.
Milanja: Lehilahy 60 - 75 pounds (27 - 34 kg) Vehivavy 50 - 65 pounds (23 - 29 kg)
Alika salama amin'ny ankapobeny. Ny tsipika sasany dia mora voan'ny PRA, ny kilema amin'ny maso (Syndrome Collie eye) ary ny olana amin'ny valahana izay mitarika lamoka maranitra ary vanin-taolana . Ny collies dia mety mila sunblock amin'ny orony satria matetika izy ireo mora tohina amin'ny masoandro. Ny alika mpiandry sasany dia mitondra ny tsimokaretina MDR1 izay mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny zava-mahadomelina sasany izay tsy maninona raha manome alika hafa, fa raha voasedra tsara ho an'ity fototarazo ity dia mety hahafaty azy ireo.
Ny Collie dia alika tsara ao amin'ny trano iray raha mbola ampiasaina tsara. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary manao ny tsara indrindra amin'ny tokotanin-trano farafahakeliny. Mahatsapa ny hafanana. Omeo alokaloka sy rano madio betsaka amin'ny toetr'andro mafana.
Mila fanatanjahan-tena be dia be ny Collie, izay misy a mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Ho fanampin'izany, mankafy romps vitsivitsy amin'ny fantsom-pifandraisana amin'ny faritra azo antoka izy ireo.
Tokony ho 14-16 taona eo ho eo
Alika kely 2 - 8, 5 eo ho eo
Ny palitao mafy dia mora mandoto ny loto ary ny fikosehana tsara isan-kerinandro dia hitazona azy ho salama tsara. Mitandrema bebe kokoa rehefa raraka ilay akanjo malemy sy matevina. Ny karazany malefaka dia manana palitao iray santimetatra ary tokony hosasana tsirairay hatramin'ny roa herinandro. Raha manana karazany matotra ny karazany lava mifono lava, ary ny alika dia tsy ampiasaina ho fampisehoana, dia mety mila tapahina ny tsihy, mifanohitra amin'ny volotara, mba hialana amin'ny fanaintainan'ny alika. Mandrosoa na shampooina maina raha ilaina. Ny Collie marokoroko dia milatsaka be in-droa isan-taona, ary ny malefaka Collie kosa dia mpanondrana antonony.
Ny tena fiavian'ilay Collie dia tsy fantatra, fa izy dia nateraky ny alika mpiandry omby miasa. Nandritra ny taonjato maro dia tsy dia fantatra tany ivelan'i Ekosy i Collie voaroy mafy. Ny collies aloha dia somary kely kokoa, miaraka amin'ny loha midadasika kokoa sy ny muzzles fohy kokoa. Ny alika dia nampiasaina hanavotana rano, mpiompy, hitarika omby sy ondry hamidy ary hiambina ny andian'ondry any Ekosy sy Angletera. Ny anaran'ilay karazany dia mety ho avy amin'ny fiadidiany ny ondry mainty hoditra skotsa antsoina hoe Colley. Tamin'ny taona 1860 dia nitandrina an'i Collies tao amin'ny Castle Balmoral any Ekosy i Queen Victoria, izay nalaza tokoa ireo alika. J.P. Morgan, miaraka amin'ny olona manankarena hafa, dia manana Collies. Tamin'ny faran'ny taona 1800 dia nifangaro tamin'ny Borzoi ny Collie, ary ny alika fampisehoana rehetra dia tokony hanana izany Borzoi ra ho azy ireo handresy amin'ny peratra fampisehoana. Nisaraka ireo alika niasa, nisampantsampana ary lasa karazana isan-karazany (miaraka amin'ny Scotch Collie sisa tavela) ary ny karazana seho dia lasa hitantsika ankehitriny, ireo alika lehibe manana endrika maloka. Ny Collie marokoroko dia be mpitia noho ny Collie malama. Ny Collie malama dia malaza kokoa any Great Britain noho ny any Etazonia, fa mahazo laza kosa any Etazonia. Ny Collie malama dia mitovy amin'ny Collie marokoroko, fa tsy misy ny palitao lava. Ny AKC dia mihevitra ny Collies marokoroko sy malefaka ho toy ny miovaova amin'ny karazany iray ihany ary izy ireo dia tsaraina amin'ny fenitra iray ihany ankoatra ny palitao. Ny Collie voalohany dia natolotra tamin'ny seho alika tamin'ny 1860. Ny Collie dia neken'ny AKC tamin'ny 1885. Fantatra amin'ny lazany ny Collie amin'ny horonantsary 'Lassie', ahitana an'i Collie mifono saropady ho mpilalao fototra. Ny talenta an'i Collie dia misy ny fiompiana, fikarohana ary famonjena, torolàlana ho an'ireo jamba, hakingana, fankatoavana amin'ny fifaninanana, filalaovana sarimihetsika, ary toy ny mpiambina sy mpiambina.
Neko ilay alika kely Collie henjana amin'ny 4 volana
Shane ilay tricolor mahery Collie
Rough Collie olon-dehibe - Sary nahazoana lalana avy tamin'i David Hancock
Buddy ilay Collie marolafy amin'ny 1 taona— 'Ity no Buddy, Rough Collie, herintaona! Alika fampisehoana izy. Rehefa eo amin'ny peratra fampisehoana izy dia tena milamina amin'ny alika matotra, fa any an-trano kosa dia milalao sy matanjaka be. Ny zavatra ankafiziny dia mihazakazaka ao an-tokotany ambadiky ny alika hafa ary ao anaty peratra fampisehoana. Ny zavatra tsy tiany indrindra dia ny dibera voanjo sy harnesses. Avy amin'ny mpiompy Collie any Wisconsin izy. Ny alika dia naseho. Mbola tsy nahazo fandresena tsara indrindra tamin'ny fampisehoana i Buddy fa manantena aho fa handresy izy indray andro any! :) '
'Dallas dia collie miloko marevaka. Ny anarany voasoratra anarana dia ny Solar's Working on a Tan. David Schuetz avy amin'ny Solar Collies any Indiana no niteraka azy. Alika faran'izay mahira-tsaina izy ary biby mahafinaritra. Izy dia momba ny FUN! Izy dia manana toetra amam-panahy sy fihomehezana mampihomehy. Tianay izy handraikitra! Dallas dia hanomboka ny asany alika fampisehoana. Izy dia aseho eto amin'ny 1 taona. '
Dallas ilay Collie malefaka misy tricolored toy ny alika kely amin'ny 4 volana
Dallas ilay Collie malefaka misy tricolored amin'ny 1 taona
Malcolm amin'ny 4 taona, Int. CH Onesti Command 'N' Mandresy WW-RN, WW-RA, CGC, TT, BPD, VC, CERF
Hijery ohatra hafa momba ny Collie
Collie Sary 1
Collie Sary 2
Collie Sary 3
Collie Sary 4
Collie Sary 5
Collie Sary 6
Collie Dogs: sary an-tsokosoko voaangona
jack russell terrier afangaro amin'ny pincher kely
orona mena afangaro sary pitbulls orona manga
loko spaniel springer anglisy mainty sy fotsy